War DagDag ha: DFS oo qaladkii ugu weynaa ebed ka galeysa shacabka Muqdisho | Xaqiiqonews
War DagDag ha: DFS oo qaladkii ugu weynaa ebed ka galeysa shacabka Muqdisho
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qaladkii ugu weynaa ebed waxa ay ka galaysaa shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho, kadib markii ay sheegtay dowladda in ciidan gaar ah ay sugi doonaan ammaanka magaalada.
Ciidamada hadda lasoo wado ayaa ah kuwii NISA ee horey ugu fashilmay sugista amniga Muqdisho, bilooyin badanna xiray waddooyinka magaalada balse aan wax isbedal ah keenin.
Ciidankaan ayaa dhammaantood ah kuwo aan magaalada wax ka qaban, hadana ay adag tahay iney wax qabtaan, markii dambena bilaabay in dhallinyarada dambi aysan lahayn u saariyaan si qarash uga qaataan, waxaana hoggaan u ah dhallinayaro aan qabiir amni haysan.
Ciidankan amniga sugaya kuma jiraan raggii hore ee yaqaanay la macaamilka shacabka, feejignaanta argagaxisada, hannanka sugista amniga waddooyinka iyo guud ahaan caasimadda.
Dowladda Xasan Sheekh ayaa ciidankaan keentay waddooyinka Muqdisho, balse iyaga oo meel walbo jooga, baaraya gaadiidka ayeey hadana qaraxyada ka dhacayeen meelaha ugu muhiimsan ee Muqdisho.